पोखरा फाइनान्सको शाखा बुटवलमा – Arthik Awaj
पोखरा फाइनान्सको शाखा बुटवलमा
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर १४ गते शुक्रबार ०८:५९ मा प्रकाशित
पोखराको न्युरोडमा प्रधान कार्यालय रहेको पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका ९, चौराहामा शाखा उद्घाटन गरेको छ । बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष खिम बहादुर हमालले एक कार्यक्रमका विच शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् ।
शाखा सञ्जाल एवं ग्राहकसेवा विस्तार गर्ने उदेश्यले बुटबलमा शाखा संचालन गरेको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुख रविचन्द्र गुरुङले स्वागत एवं अध्यक्ष भुवनसिं गुरुङले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
जारी पुँजी रु. ८५.७२ करोड रहेको यस वित्तीय संस्थाको हालसम्म निक्षेप रु. ५ अर्व २ करोड तथा कर्जा लगानी रु. ४ अर्व ४१ करोड एवं जगेडा कोषमा रु. २४ करोड ९२ लाख रहेको छ । बुटवल शाखा मार्फत् संस्थाले निक्षेप एवं कर्जा, मोबाइल बैकिङ तथा सि-आश्वा लगायतका सेवा प्रदान गर्नेछ । हालै सम्पन्न वित्तीय संस्थाको आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको नगद तथा बोनस सेयर समेत गरी कुल १३.६८४ प्रतिशत मुनाफा वितरण गरिएको कार्यकारी प्रमुख रविचन्द्र गुरुङले जानकारी दिए ।